Ndinoratidza Sei Bhatiri Peresenti Pane iPhone X, XS, XS Max, Uye XR? - Iphone
iphone yakanamatira nhema skrini inotenderera vhiri
iphone haina kubatidza asi inoratidza kuchaja
fitbit flex sync kune iphone
yangu iphone haigoni kubatanidza kune itunes
Iwe unoda kutarisa kuti ingani hupenyu hwebhatiri iyo yako nyowani iPhone yasara, asi iwe hauna chokwadi kuti sei. Wakaenda kuZvirongwa -> Bhatiri, asi pakanga pasina switch yaunogona kuvhura! Muchikamu chino, ini ndichakudzidzisa maitirwo ebheteri muzana pane iPhone X, XS, XS Max, kana XR !
kuchinja sei memoji yako
Maitiro Ekuratidza iPhone X, XS, XS Max, Uye XR Battery Percentage
Nzira chete yekuratidza bhatiri muzana pane iPhone X, XS, XS Max, kana XR ndeye kuvhura Control Center. Kuti uvhure Control Center, Rova zvakasimba pasi kubva kumusoro kurudyi-kona yekona. Yako iPhone's bhatiri muzana icharatidzirwa mukona yepamusoro-kurudyi kona yekona!
Nei Apple Yakachinja Iyo Nzira Yekutarisa Bhatiri Peresenti?
Iwe waimbove wakakwanisa kuona iyo iPhone's bhatiri muzana yakanangana neIyo Screen Screen nekubatidza switch mune Zvirongwa -> Battery. Zvisinei, sezvo Apple yakaunza notch, panongova pasina nzvimbo kumusoro kweImba skrini kuratidza bateri muzana. Ndicho chikonzero Apple yakaiendesa kuControl Center!
Iko Yako iPhone Bhatiri Hupenyu Hwepasi?
Zvinogona kushungurudza kuona nhamba diki pese paunotarisa huwandu hwebhatiri pane yako iPhone X, XS, XS Max, kana XR. Neraki, pane zvakawanda zvaunogona kuita kuti igare kwenguva yakareba. Tarisa uone chinyorwa chedu chinopfuura gumi nemaviri matipi ekuchengetedza iyo iPhone bhatiri hupenyu !
Usambofa Wakarasa Track YeBhatiri Peresenti Zvakare!
Iwe ikozvino unoziva kuratidza bateri muzana pane ese matsva maPhones. Ita shuwa yekugovana ichi chinyorwa pasocial media nechero munhu waunoziva uyo achangokwidziridza yavo iPhone. Siya chero mimwe mibvunzo yauinayo nezve iyo iPhone X, XS, XS Max, kana XR pasi pazasi muchikamu chemashoko!